Public Health in Myanmar: June 2011
ခေတ်မှီတိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာခေတ်ကြီးမှာ လူတိုင်းလူတိုင်း ပါးစပ်ဖျားမှာ ရေပန်း စားနေတဲ့ စကား လုံးကတော့ အားဆေးဆိုတဲ့စကားလုံးပဲဖြစ်ပါတယ် ။ အားဆေးတွေမှာလည်းပါဝင်တဲ့ composition ကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဗီတာမင်မျိုးစုံနဲ့ သတ္တုဓါတ်မျိုးစုံကို အမျိုးအစားစုံလင်စွာဖြင့် ရေးပြီးဖော်ပြထားတာကို တွေ့ဖူးကြပါလိမ့်မယ် ။ ဗီတာမင်တစ်မျိုးစီရဲ့အကြောင်း သတ္တုဓါတ်တစ်မျိုးစီရဲ့အကြောင်းကို အသေးစိတ် လေ့ လာ သိရှိတဲ့သူကတော့ နည်းပါးပါလိမ့်မယ် ။ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဇင့်ဓါတ် (Zinc) ရဲ့အရေပြားအပေါ်မှာ ဘယ်လို ကောင်းကျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ တခြားကျန်းမာရေး ကောင်းကျိုးတွေဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကို လေ့လာ ကြည့်ကြရအောင် ။
ဇင့်ရဲ့ကျန်းမာရေး အထောက်အကူပြုမှုတွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်မှာ စနစ် (system) ပေါင်းများစွာနဲ့ ဆက်နွယ် ပတ်သတ်မှု ရှိနေပါတယ် ။ ဇင့်ရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေအနေနဲ့
- ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားစနစ် ( Immune system)
- အစာခြေခြင်း ( Digestion)
- ဆီးချိုသွေးချိုအား ထိမ်းချုပ်ခြင်း ( Control of diabetes)
- စိတ်ဖိစီးမှု အား ထိမ်းချုပ်ခြင်း ( Improves stress level)
- စွမ်းအင်ဇီဝကမ္မ ဖြစ်ပျက်ခြင်း ( energy metabolism)
- ၀က်ခြံနှင့် အနာများသား သက်သာစေခြင်း ( acne and wounds healing ) စသည်တို့ပါဝင်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည် တွေ မှာလည်းလိုအပ်ပြီး ၊ ဆံသား အလှထိမ်းသိမ်းဖို့ ၊ နှင်းခူ ၊ အ၀လွန်ခြင်းအား လျော့ ချရန် ၊ ကြက်မျက်သင့်ရောဂါ ( Night blindness ) ၊ မျက်စိကျန်းမာရေး ၊ အစားအသောက်ပျက်ခြင်း နဲ့ တခြား အရာ တွေအတော်များများဟာ ဇင့်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာ ကျယ်ပြန့်စွာ ပါဝင်ပတ်သတ်မှု ရှိနေပါတယ် ။
ဇင့်ဟာ ပရိုတိန်းဓါတ်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ် ( protein synthesis) မှာ အရေးကြီးတဲ့ သတ္တုဓါတ် အခန်း ကဏ္ဍ မှပါ ၀င်ပြီး လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှ ခန္ဓာကိုယ် ခုခံအားစနစ်မှာ ဆဲလ်တွေ ပုံမှန်လည်ပတ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို ကူညီပေးပါတယ် ။ ဇင့်ကို ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကြွက်သားတွေမှာ များစွာတွေ့ရလေ့ရှိပြီး အထူးသဖြင့် သွေးဖြူဥ ၊ သွေးနီဥ ၊ မျက်စိ အာရုံခံလွှာ ( retina) ၊ အရေပြား ၊ အသည်း ၊ ကျောက်ကပ် ၊ အရိုးနဲ့ ပန်ကရိယ တို့မှာ သိပ်သည်းပေါများစွာ တွေ့ရ လေ့ရှိပါတယ် ။ အမျိုးသားတွေမှာဆိုရင်တော့ သုတ်ရည် (semen ) နဲပ ဆီးကျိတ်ဂလင်း ( prostate gland) တို့မှာ ဇင့်ကိုပေါများစွာ တွေ့ရှိရပါတယ် ။ လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ပုံမှန်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ အင်ဇိုင်း ၃၀၀ သို့မဟုတ် ဒီထက်မက ဇင့်ကို ပိုလိုအပ်ပါတယ် ။ လေ့လာစမ်းသပ်သူတွေက ပရိုတိန်း ၁၀၀ ၀၀၀ မှာ ၃၀၀၀ လောက်က ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဇင့်ပါဝင်ပတ်သတ်နေမှုတွေနဲ့ ဆက်နွယ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။ ပုံမှန်လူတစ် ယောက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဇင့်ဓါတ် ၂ ဂရမ်မှ ၃ ဂရမ်အထိ ပါဝင်ပါတယ် ။
လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဇင့်ကို စစ်ထုတ်ပေးတဲ့ တံတွေးဂလင်း (Salivary gland ) ၊ ဆီးကြိတ် ဂလင်း ( prostate gland ) နဲ့ ပန်ကရိယ ( pancreas ) ကဲ့သို့ သော ကိုယ်အဂါင်္အစိတ်အပိုင်းတွေရှိပါတယ် ။ Immune cells တွေကလည်း ဇင့် ကို စစ်ထုတ်ပေးပါတယ် ။
- ပုံမှန်ကြီးထွားမှု ချို့ယွင်းခြင်း
- အရိုးကြီးထွားမှု ချို့ယွင်းခြင်း
- အနံအရသာအာရုံခံမှု ဆုံးရှုံးခြင်း
- လက်ချောင်းထိပ်လက်သည်းခွံများတွင် အဖြူစက်များဖြစ်ပေါ်ခြင်း စသည့် လက္ခဏာများကိုတွေ့ရနိုင်ပါတယ် ။
ဇင့်ကို ဘယ်တွေကနေတဆင့်ရရှိနိုင်သလဲ ?
ဇင့်ကို ရရှိနိုင်တဲ့ အဓိက အစားသောက်တွေကတော့ အသားတွေပဲဖြစ်ပါတယ် ။ တခြားအစား အသောက်တွေ ကတော့ ကမာ ၊ ကမုတ်ကောင် ၊ တရုတ်မုန်လာ ၊ ပဲအမျိုးမျိုး ၊ အုတ်ဂျုံ ၊ မြေပဲ ၊ မက်မွန် ၊ ဂျုံစေ့ ၊ ရွှေဖရုံစေ့ ၊ ဂျင်းပင် အမြစ် နဲ့ ပီကမ် pecan အစေ့ စသည်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ် ။
ဇင့်ရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေက ဘာတွေလဲ ?
ကျန်းမာရေးအပေါ် အထောက်အကူပြုတဲ့ ဇင့်ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ် ။
ဇင့်ဟာ ကျန်းမာလှပတဲ့အရေပြားဖြစ်ဖို့အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။ အနာတွေကို သက် သာ ပြီး healing ကောင်းစေယုံသာမကပဲ အရေပြားထိခိုက်ရှနာများကိုလည်းသွေးတိတ်စေပြီး ၀က်ခြံကို လည်း သက်သာ ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ် ။ ဇင့်ပါဝင်တဲ့ သောက်ဆေးတွေဟာ အိပ်ရာနာ (bed sores) ၊ အရေပြား အနာ ၊ အအေးနာ ( cold sores ) ၊ အာခံတွင်းအပူနာ ၊ ခွဲစိတ်အရာ ၊ မီးပူလောင်နာ နဲ့ တခြားအ ရေပြားမှာ ဖြစ်တာအတော်များများကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ် ။ အနာသက်သာစေဖို့အတွက် အနာကျက် စေဖို့အတွက် ဇင့်ပါဝင်တဲ့လိမ်းဆေးတွေကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ။ ဇင့်ဟာ ကိုလာဂျင် (collagen) တွေဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ သတ္တုဓါတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အင်ဇိုင်းတွေ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ဖိုပလည်း ကူညီပေး ပါတယ် ။ ဇင့်ဟာ astringent လည်းဖြစ်ပါတယ် ။ Astringent ဆိုတာဟာ ဓါတုပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အရေပြား နဲ့တစ်ရှူး တွေကို ကျုံ့ခြင်း ၊ ကျဉ်းခြင်းနဲ့တင်းကြပ်စေခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ် ။ Zinc oxide ဟာဆိုရင်လည်း အရေပြား မှာ အရောင်ကျခြင်းအစွမ်းသတ္တိရှိပါတယ် ။ အရေပြားကို ယားယံခြင်းမှကာကွယ်ပေးပြီး အေးမြချော မွေ့စေခြင်း ၊ အနီကွက်များဖြစ်ပေါ်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးပြီး အရေပြားစိုစွတ်ထိုင်းမှိုင်းခြင်းကိုလည်း ကာကွယ်ပေး ပါတယ် ။ Dermatitis herpetiformis ဆိုတာဟာ နာတာရှည်အရေပြားရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။ အရေပြား မှာ အလွန်ယားယံပြီး ပူလောင်ခြင်း နာကျင်ခြင်းကို ခံစားရစေပါတယ် ။ အရေပြားပေါ်မှာအထူးသဖြင့် တံတောင် ဆစ် ၊ ဒူးခေါင်း ၊ တင်ပါးတို့မှာ ပြည်ဖုလေးတွေပေါက်စေပြီးနာကျင်ပါတယ် ။ ဇင့်ဟာ ဒီအရေပြား ရောဂါမှာလည်း သက်သာပျောက်ကင်းစေတယ်လို့ လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ် ။ ဇင့်ကို ၀က်ခြံကုသဖို့နဲ့ကာကွယ်ဖို့အတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ။ Zinc gluconate သို့မဟုတ် zinc sulfate တို့ဟာ acne ကို ကုသပေးနိုင်ပြီး ၀က်ခြံကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ရောင်ရမ်းမှုကို လျော့နည်းစေပါတယ် ။ ပြီးတော့ အရေပြားမှာ အန်ဒရိုဂျင် ဟော်မုန်း တွေများလို့ ဖြစ်ပေါ် လာတဲ့ androgenic hormonal effects တွေကိုလည်း လျော့နည်းစေပြီး အရေပြား ရဲ့အဆီဂ လန်းတွေ ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုကို ပုံမှန်လည်ပတ်စေပါတယ် ။
ဇင့်ကို ဗောက်ပျောက်ကင်းစေဖို့ Anti-dandruff အနေနဲ့လည်းသုံးနိုင်ပါတယ် ။ Zinc pyrithione ကို တခါတ၇ံ ဗောက်ပျောက် ခေါင်းလျှော်ရည်တွေမှာ တွေ့ရလေ့ရှိပြီး အရေပြားပြဿနာတွေကို သက်သာ ပျောက်ကင်း စေပါတယ် ။ ဒါကြောင့်ဇင့်ပါဝင်တဲ့သောက်ဆေးတွေဟာ ဗောက်ရောဂါကိုကာကွယ်ဖို့ အသုံးဝင်ပါတယ် ။ ဇင့်ရဲ့အရေပြား ပေါ်မှာ အခြားကောင်းကျိုးတစ်ခုကတော့ အင်းဆက်ပိုးမွှားတွေကို သဘာဝအလျှောက် ကာကွယ်ပေး နိုင်ပြီး နေရောင်ခြည်ဒါဏ်ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ် ။ ဇင့်အောက်ဆိုက်ဟာ နေရောင်ခြည်ရဲ့ UV Rays ကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ် ။ သွားဖုံးရောဂါတွေကိုလည်း ကုသပေးနိုင်ပြီး ဗီတာမင် အေကို အသည်းကနေ အရေပြားကို ပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်း အဓိက ပါဝင်လှုံ့ဆော်ပေးပါတယ် ။ Zinc sulfate ဟာ contact dermatitis ကို ကုသပေးနိုင်ပြန်ပါတယ် ။ Eczema လို့ခေါ်တဲ့ နှင်းခူရောဂါမှာလည်း ဇင့်ကိုအသုံး ပြုနိုင်ပြီး နှင်းခူဟာ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဇင့်ဓါတ်ချို့တဲ့လို့ အဓိကဖြစ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ။
ဇင့်ဟာ ဆီးကြိတ်ရောဂါတွေမှာလည်းအရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နေပြန်ပါတယ် ။ ဇင့် ချို့တဲ့ရင် ဆီးကြိတ်ကြီးလာစေပြီး ကင်ဆာကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့်နေ့စဉ် ဇင့် ၁၅ ဂရမ်ကို လိုအပ်ပြီး ဆီး ကြိတ်ကြီးခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ် ။
ဇင့်ပါဝင်တဲ့သောက်ဆေးတွေဟာ အအေးမိဖျားနာခြင်းတွေရဲ့ ပြင်းထန်မှုနဲ့ကြာချိန်ကို လျော့နည်းစေပါတယ် ။ ဇင့်ဟာ proinflammatory cytokinesis ရဲ့ပမာဏကို လျော့နည်းစေပြီး ဒါဟာ အထူးသဖြင့် အအေးမိပိုး ၀င်ခြင်း cold infections မှာ ပိုဆိုးဝါးစေပါတယ် ။
ဇင့်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိန်စေပြီး လူတစ်ယောက်ရဲ့ အစာစားချိန်စိတ် appetite ကို ထိမ်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ် ။
ဇင့်ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ DNA repair and function အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ် ။ ဆဲလ်တွေ အလျှင် အမြန်ကြီးထွားစေဖို့ နဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ အဓိက ဆဲလ်တွေတည်ဆောက်ဖို့အတွက် ဇင့်ကို လိုအပ်ပါတယ် ။
ယောင်္ကျားလေးတွေမှာဆိုရင်တော့ ဇင့်ဟာ သုတ်ကောင်များဖြစ်ထွန်းစေခြင်း ( spermatogenesis) နဲ့ မျိုးပွား အဂါင်္တွေ ဖြစ်ထွန်းစေဖို့အတွက် အထောက် အကူပြုပါတယ် ။ မိန်းကလေးတွေမှာဆို၇င်လည်း မျိုးပွား အခြေ အနေ အားလုံး( နို့ချိုတိုက်ကျွေးချိန်အပါအ၀င်) ဇင့်က အထောက်အကူပြုပေးပါတယ် ။
အထက်ဖော်ပြပါကောင်းကျိုးတေါအပြင် bilogical function အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ၊ ရောဂါပိုးမွှား infection များ အား တိုက်ထုတ်ပေးခြင်း ၊ ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်း (antioxidant) အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ၊ အင်ဇိုင်း လည် ပတ်မှုတွေကူညီပေးခြင်း ၊ ဆီးကြိတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်မှုအားလျော့ကျစေခြင်း ၊ နာတာရှည်မော ပန်းနွမ်း နယ်ခြင်းအား သက်သာစေခြင်း ၊ ထိပ်ပြောင်ခြင်းနှင့်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းအားကာကွယ်ပေးခြင်း ၊ အရိုးဆုံးရှုံးခြင်းအား လျော့နည်းစေခြင်း နှင့် ညဖက်တွင်အမြင်အာရုံချို့ယွင်းခြင်း (night blindness) ကိုကာကွယ် ပေးနိုင်ခြင်း စတဲ့အစွမ်းသတ္တိတွေရှိနေပါတယ် ။
ဇင့်ဓါတ်ကို ကျန်မာရေးရှူထောင့်ကနေ ဘယ်လိုအကျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုကောင်းစွာသိရှိပြိး ဗဟုသုတများစွာနှင့် ပြည့်စုံ နိုင်ကြပါစေ ။
Ref : Organic Health (Health benefits of zinc )
Posted by သက်တန့်ချို0comments
Labels: health education, Public health, Skin health, Zinc
အဖြူဆင်းခြင်း (White discharge)
လူ့လောက လူ့သဘာဝမှာ အမျိုးသမီးလေးတွေကို ပန်းကလေးတွေအဖြစ် တင်စားပြောဆိုကြပါတယ် ။ ပန်း ကလေးတွေ ဆိုတာ ငယ်ရွယ်နုပျိုစဉ်မှာ အစွမ်းကုန် ပွင့်ဖူးလှပလေ့ရှိပြီး ကြီးရင့်လာတဲ့အခါမှာတော့ ညှိုးနွမ်း ခြောက်သွေ့ သွားလေ့ရှိတယ် ။ ဒီလိုအချိန်လေးအတွင်း အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ မီးယပ်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ပြဿနာ မျိုးစုံ ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ် ။ အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ မီးယပ်ပြဿနာမျိုးစုံထဲကမှ White discharge လို့ခေါ်တဲ့ အဖြူဆင်းခြင်း ပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ် ။
အဖြူဆင်းခြင်း ဘယ်နှစ်မျိုးရှိသလဲ ?
အဖြူဆင်းခြင်းကို ယေဘူယျအားဖြင့် နှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်ပါတယ် ။ မူမှန်အဖြူဆင်းခြင်း ( normal white discharge ) နဲ့ မူမ မှန် အဖြူဆင်းခြင်း ( abnormal white discharge) စသည်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ သာမန်အပျိုဖော်ဝင် (puberty) တဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာ တစ်လမှာ ပုံမှန် နှစ်ကြိမ်ခန့် အဖြူဆင်းလေ့ရှိကြပါတယ် ။ အဲဒါကို မူမှန် အဖြူဆင်းခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ် ။ ပထမအကြိမ်ဟာ ပထမလနဲ့ ဒုတယလရဲ့ ထက်ဝက်ဝက်လိုက်ရင် အလယ် ရက်တွေမှာ အဖြူဆင်းပါတယ် ။ ဒုတိယအကြိမ်ကတော့ သွေးမပေါ်ခင် တစ်ရက်ရက်မှာ ဆင်းလေ့ရှိကြပါတယ် ။ အဲဒီလိုဆင်းတာဟာ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ သတိထားမိလောက်တဲ့ ပမာဏမဟုတ်ပဲ အနည်းငယ် (သို့မဟုတ်) ခြောက်မနေပဲ စိုစိစိ ဖြစ်နေယုံလောက်ပဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့်ယေဘူယျကြည့်မယ်ဆိုရင်
- ဆီးစပ် နှင့်ပေါင်ရင်း ၊ အောက်ခံဘောင်းဘီ စိုတဲ့အထိလောက်တော့ပမာဏမများပါဘူး ။
- ဆိုးရွားတဲ့ အနံ့အသက်နဲ့ ယားယံမှုတွေမရှိပါဘူး ။
- အချိန်ကာလအနေဖြင့်လည်း အထက်ပါပြောခဲ့တဲ့ အချိန်တွေမှာ ဆင်းလေ့ရှိကြပါတယ် ။
အဲဒါကပို မူမှန်သော ဇီဝကမ္မပြောင်းလဲမှု ( Normal Physiological Change) လို့ ခေါ်တွင်ပါတယ် ။ အမျိုး သမီးလေးတွေ အနေနဲ့ ဒီသဘောတရားကို နားလည်ဖို့လိုပါတယ် ။ တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေး အတွက်လည်း အိမ်မှ ရေသန့်သန့်နဲ့ ဆပ်ပြာနုနုလေးတွေ သုံးလို့ရပါတယ် ။ ကာဘော်လစ်လို ဆပ်ပြာမျိုးသုံးဖို့ မသင့်တော်ပါဘူး ။ အပေါ်ယံပဲ ဆေးကြောဖို့လိုပြီး အတွင်းအထိဆေးကြောဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး ။ အန္တရာယ်မရှိတဲ့ မူမှန်အဖြူ ဆင်းခြင်းဖြစ် တဲ့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ ပြသဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး ။ Personal hygiene ကောင်းဖို့လိုပါတယ် ။
တစ်ချို့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေးအတွက် ဒတ်တော ၊ အဆက်ပ်တော စတဲ့ ပိုး သတ်ဆေးတွေနဲ့ အတွင်း ဖက်ကို ဆေးကြောခြင်းများ ပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ် ။ ဒါဟာ လုံးဝမကောင်းပါဘူး ။ ပိုးသတ်ဆေးတွေဟာ မိန်းမကိုယ်မှာရှိတဲ့ အကျိုးပြု ဘတ်တီးရီးယား ( helpful bacteria) တွေကို သတ် ပစ်လေ့ ရှိပြီး အက်ဆစ်ဓါတ်ကို လျော့စေပါတယ် ။ Acid ဓါတ်ကျသွားရင် ပြင်ပ ဘတ်တီးရီးယား ပိုးတွေဝင် လာစေပြီး မူမမှန် အဖြူဆင်းခြင်း ( Abnormal white discharge) ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ် ။
မူမမှန် အဖြူဆင်းခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့ မူမှန်အဖြူဆင်းခြင်းရဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက်တွေပါပဲ ။
- အဖြူဆင်းသော ပမာဏများခြင်း
- ဆိုးရွားသော အနံ့အသက်များရှိခြင်း
- ယားယံခြင်းစသည်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ် ။
မူမမှန် အဖြူဆင်းခြင်းကို ဖြစ်ပွားစေတဲ့ အချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ် ။ ယေဘူယျအားဖြင့် ပိုးဝင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်တာ ၃ မျိုးရှိပါတယ် ။ အဲဒီလိုမဟုတ်ပဲ သားအိမ်ခေါင်း (cervix) က အလုပ်လုပ်တာ များလွန်းတဲ့အ တွက်ကြောင့်(လိင်ဆက်ဆံမှုများခြင်း) အဖြူဆင်းတာလည်းရှိပါတယ် ။ သားအိမ်ထဲထည့်တဲ့ သန္ဓေတားပစ္စည်း (IUCD) ကြောင့် လည်းဆင်း တာရှိပြီး တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်း မှု မမှန်လို့ stress ( စိတ်ဖိစီးသောက) များမှုကြောင့် လည်း အဖြူဆင်းရ တာတွေရှိပါတယ် ။
Post menopausal white discharge
အသက်ကြီးမှ abnormal white discharge ဆင်းတာတွေလည်းရှိပါတယ် ။ ဒါကြောင့် အသက်ကြီးသွေးဆုံးပြီးမှ အဖြူဆင်း မယ်ဆိုရင်တော့ သားအိမ်လည်တံကင်ဆာနဲ့ သားအိမ်ကင်ဆာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်တာကြောင့် တတ်ကျွမ်း တဲ့ သားဖွားမီးယပ် ဆရာဝန်နဲ့ ပြသသင့်ပါတယ် ။
မူမမှန်အဖြူဆင်းခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ ပိုးဝင်ခြင်း ၃ မျိုးရှိပါတယ် ။ ပထမတစ်ခုကတော့ (Trichomonas vaginitis) လို့ခေါ်တဲ့ မိန်းမကိုယ်ရောင်ရမ်းယားယံခြင်း ၊ အဖြူဆင်းခြင်းဖြစ်ပြီး ဒုတိယတစ်မျိုးကတော့ မှိုစွဲကပ် တဲ့ရော ဂါတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ (Fungal vaginitis or monelial vaginitis) ဖြစ်ပါတယ် ။ တတိယ တစ်မျိုးကတော့ ၂ မျိုးစလုံးပေါင်းပြီးဖြစ်တဲ့ပိုးဝင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ။ အဖြူဆင်းများပြီး အနံ့ဆိုးရွားမယ် ဆင်းနေတဲ့ အဖြူရဲ့ သဘောသဘာဝ ကို ကြည့်ပြီး ဘာပိုးဝင်လဲဆိုတာ ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ် ။ ဥပမာအနေနဲ့ မိန်းမ ကိုယ်မှာ မှိုစွဲပြီးရောင် ရမ်းခြင်းဖြစ်တာဟာ အများအားဖြင့် Pregnancy တွေနဲ့ ဆီးချိုသွေးချို ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာ မကြာ ခဏ အ ဖြူဆင်းလေ့ရှိကြပါတယ် ။ ပမာဏလည်းများပြီး ယားယံခြင်းနဲ့ အနံအသက် ကလည်းမကောင်း ပါဘူး ။ ဒီလိုမျိုးပဲ မှိုစွဲပြီး အဖြူလည်းခဏခဏဆင်းပြီး ပမာဏများပြီုး ယားမယ် အနံ့အသက် လည်းမကောင်း ဘူးဆိုရင် အဆိုပါအမျိုးသမီးမှာ ဆီးချိုသွေးချို ရှိနိုင်ပါတယ် ။ မဟုတ်ရင်လည်း အမျိုးထဲမှာ ဆီးချိုမျိုးရိုး ရှိနိုင်ပါတယ် ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေမှာ ဒီလိုမကြာခဏဖြစ်တယ်ဆိုရင် မှိုစွဲတာကြောင့်ဖြစ်တာလို့ ခန့်မှန်းရင် ၉၀% မှန်လေ့ရှိပါတယ် ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ သွေးချိုဆီးချို သမားတွေမှာ မှိုစွဲပြီးမှုမမှန် အဖြူဆင်းတဲ့အကြောင်းကတော့ Monellia ဆိုတဲ့ မှိုက အချို ကို နှစ်သက်ပြီး အက်ဆစ်ကို ကြိုက်ပါတယ် ။ Pregnancy အချိန်မှာ လိုင်နင်ဆဲလ်တွေက Glycogen အချိုဓါတ်ပိုများ လာသလို အချဉ်ဓါတ်လည်းပိုများလာပါတယ် ။ အဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးဟာ Fungus တွေ အကြိုက် ဖြစ်တာောကာင့် အဖြူဆင်းတာလည်းမကြာခဏဖြစ်လာပြီး ဆီးချိုသွေးချိုသမားမှာလည်း ဒီသဘော အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ။
Trichomonas vaginitis ကြောင့် အဖြူဆင်းရတဲံအဓိက အကြောင်းအရင်းကတော့ လိင်ဆက်ဆံ မှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် တပ်အပ်ကြီးတော့ပြောလို့မရပါဘူး ။ ဥပမာ ဒီပိုးရှိနေတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်က အိမ်သာ က မုတ်ပေါ်သွားတယ် နောက်တစ်ယောက်အပျိုစင်လေးကလည်း သွားမိရင်သူ့မှာကူးစက်သွားပြီး အဲဒီအပျို စင်လေးကို လိင်ဆက်ဆံမှုကြောင့်ဖြစ်တာပါလို့တော့ စွပ်စွဲလို့မရဘူးပေါ့ ။ ဒီလိုအခြေအနေ မျိုးတွေလည်းရှိ တတ်ပါတယ် ။ နောက်ပြီး အမေတွေ အစ်မတွေဆီကလည်း တဆင့်ကူးတတ်ပါတယ် ။ အမျိုးသမီးတွေ အတူနေတဲ့အခန်းတွေ ဘော်ဒါဆောင်တွေမှာလည်း ထဘီငှားဝတ်တာတွေ အတွင်းခံတွေ ငှားဝတ် တာတွေက တဆင့်လည်းကူးနိုင်ပါသေးတယ် ။
ကုသမှုအပိုင်းမှာတော့ ခေါ်မှီတိုးတက်လာတဲ့နည်းပညာအရ ဆေးဝါးတွေကလည်း အရမ်းကို ခေတ်မှီလာပါတယ် ။ ရောဂါရာဇ၀င် history ကို မေးကြည့်လိုက်လို့ Trichomonas vaginitis လို့ သေချာရင် တော့ အမျိုးသမီးရော သူ့ရဲ့ partner ယောင်္ကျားပါ တစ်ပြိုင်တည်းကုသမှုခံယူရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ အများအားဖြင့် ယောင်္ကျားဖြစ်သူဟာ ပိုးသယ်ဆောင်သူ ( carrier) ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ် ။ ယောင်္ကျားမှာတော့ လက္ခာပြလေ့မရှိပဲ မိန်းမဖြစ်သူမှာသာ လက္ခဏာ ပြလေ့ရှိပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ပြန်ပြန်ဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်ဖို့ ပြိုင်တူကုသဖို့လိုပါတယ် ။ ဆေးကတော့ ရိုးရိုးလေးပါပဲ ။ Metronidazole ဆေးကို မနက် ၊ နေ့လည် ၊ ည တစ်ပြားဆီ ၂ ယောက်စလုံး တစ်နေ့ ၃ ကြိမ် ၇ ရက်သောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် ။
Trichomonas ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အဖြူဆင်းခြင်းဟာ အရောင်က ဖြူမနေပဲ စိမ်းဝါ၀ါအရောင်ရှိပါတယ် ။ ပမာဏ များပြီး အောက်ခံဘောင်းဘီစိုမယ် ။ ယားယံမယ် နောက်ပြီးအနံ့လည်းရှိပါတယ် ။ မိန်းမကိုယ်တစ်ခုလုံး ရဲနေပြီး အဲဒီ အပေါ်မှာ အမည်းပြောက်အဖြူပြောက်လေးတွေ တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ် ။ မှိုစွဲတာကြောင့် မှုမမှန်တဲ့ အဖြူဆင်းခြင်းမှာကျတော့ မိန်းမကိုယ်နံရံမှာ အဖြူဖတ်လေးတွေ ကပ်နေလေ့ရှိတယ် ။ အဲဒါကို milk cast လို့လည်းခေါ်ပါတယ် ။ တစ်ဆို့ဆို့နဲ့နေရခက်တဲ့ လက္ခဏာတွေခံစားရလေ့ရှိပါတယ် ။ Trichomonas vaginitis ဆိုတာသေချာရင်အထက်ကပြောသလို ဆေးသောက်လို့ရသလို မိန်းမကိုယ်ထဲ ထည့်တဲ့ဆေးတွေ လည်းသုံး လို့ရပါတယ် ။ မှိုစွဲလို့ အဖြူဆင်းတာကိုလည်း ထည့်ဆေးစားဆေးတွေသုံးလို့ရပါတယ် ။ တိုးတက်လာတဲ့ဆေး ပညာအရနောက်ပိုင်းမှာ ပိုးစွဲတဲ့ ၃ မျိုးစလုံးအတွက် အဆင်ပြေတဲ့ ထည့်ဆေးတွေရှိလာပါတယ် ။ တစ်ညတစ် လုံးနဲ့ ၆ ည ထည့်ပေးရပါတယ် ။
အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေ ၊ ကျောင်းသူလေးတွေအနေနဲ့ အဖြူဆင်းတာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဗဟုသုတတွေပြည့် ၀နေဖို့လို ပါတယ် ။ တချို့ဆို စာမေးပွဲတွေလည်းရှိတယ် ။ အိပ်ရေးတွေပျက်ပြီး သွေးအားနည်း ပြီးတော့ မူမှန်အဖြူ ဆင်း တာတွေဖြစ်တာကို စိတ်ပူစိတ်ညစ်စရာမလိုပါဘူး ။ သွေးအားပြန်ပြည့်အောင် အနားယူပြီး ပုံမှန်စားသောက် လိုက်ရင်ပြန်ကောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ။ IUCD ကြောင့်ဖြစ်တာဆိုရင်လည်း အဲဒါပြန်ထုတ် လိုက်ရင်ကောင်း သွားပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုသတိထားရမှာကတော့ ဆီးပူညောင်းကျရောဂါ ပိုး Ganorrhoea ကြောင့် ဖြစ်တာဆိုရင်တော့ သင့်တော်တဲ့ ပိုးသတ်ဆေး Antibiotic ကိုသုံးဖို့လိုပါတယ် ။ ဆရာဝန် နဲ့ပြဖို့လိုပါတယ် ။ မူမှန်အဖြူဆင်းတာဟာ သွေးဆုံးချိန်မတိုင်ခင်အထိ ကြုံတွေ့နေရဦးမှာပါပဲ ။ မဆင်းရင် လည်းပိုးဝင်မယ် ။ ယောင်္ကျားနဲ့ အတူနေလို့မရဘူး ။ ဒါကြောင့် မူမှန်အဖြူဆိုတာ စိတ်ပူဖို့မလို ဘူးဆို တာ သိထားစေချင်ပါတယ် ။ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့လည်း အမျိုးသမီးစကားဝိုင်းတွေမှာ အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေး အကြောင်းကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးပြောဆိုကြဖို့လိုပ့ါတယ် ။ တချို့က ဘယ်သူ့ကိုမှ လည်း မပြောပဲ ငါတစ်ယောက် တည်းဒီလိုဖြစ်နေတာပါလားဆိုပြီးတော့အတွေးတွေဝင်သွားတတ်ပါတယ် ။
အမျိုးသမီးတွေသာမက အမျိုးသားတွေရော ဒီသဘောသဘာဝ ကိုနားလည်ပြီး မိမိ partner ကိုတန်ဖိုး ထားနိုင် ကြ ပါစေ ။ အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဗဟုသုတတွေ ပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေ ။
Ref : Health Education on Reproductive Health ( Prof . Myint Mg Mg )
Posted by သက်တန့်ချို 1 comments
Labels: Health care, health education, Health system, Hygiene, Medical Education, Public health, Reproductive organ disorders မျိုးပွားအင်္ဂါ ပြဿနာ
ပျားရည်မှာကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကောင်းကျိုးအချက်အလက်တွေ မြောက်များစွာ ရှိနေတယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော် တို့ လေ့လာကြည့်ရအောင် ။ သူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေနဲ့ သင့်ရဲ့ လူနေမှု ဘ၀ကျန်းမာရေး မှာ လွန်စွာ အသုံးဝင် ပါတယ်တဲ့ ။ ပျားရည်ရဲ့ ချိုမြတဲ့ အရသာဟာ သင့်ရဲ့ အရသာ အာရုံခံ အဖုလေးတွေကို လှုံ့ဆော်ပေး ယုံသာ မကပဲ အစာစားချင်စိတ်ကိုလည်း ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် အစားအစာများ ချက်ပြုတ်ရာမှာလည်း မွှေးပျံ့ သင်း ကြိုင်နေအောင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ပျားရည်နဲ့ မုန့်အမျိုးမျိုး ကို ပြုလုပ်စားသုံးနိုင်ပါသေးတယ် ။ ကယ်လို ရီ မြောက်များ စွာပါဝင်ပြီး လည်ချောင်းယားယံပြီး မသက်မသာ ဖြစ်တာတွေကိုလည်း ဖုံးအုပ်ကာ ကွယ်ပေး ထားနိုင်ပါတယ် ။ ယခုဆိုရင်စမ်းသပ်လေ့လာသူတွေဟာ ပျားရည်ရဲ့ ဆေးပညာဆိုင်ရာ ကောင်းကျိုး (medical benefits ) တွေကို ရှုထောင့်ပေါင်းစုံကနေ နည်းလမ်းပေါင်းများစွာနဲ့ စမ်းသပ်အဖြေထုတ်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ် ။
ပျားရည်ဟာ သင့်ရဲ့ အာခံတွင်းထဲမှာ စိတ်ကျေနပ်မှု ဖြစ်စေယုံသာမကပဲ ပိုးသန့်စင်စေခြင်း ( Antiseptic) ၊ ဓါတ်တိုး ဆန့်ကျင်ပစ္စည်း (Antioxidant) ၊ ခန္ဓာကိုယ်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေခြင်းစတာတွေကို လုပ်ဆောင်ပေး ပါတယ် ။ အမျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင်လည်း အရေပြားနဲ့ အသားအရည်ကို ၀င်းပစိုပြည်စေပြီး ခြုံငုံပြီးကြည့် မယ်ဆို ရင် အနာကျက်မြန်ခြင်း ။မျက်ခမ်းစပ်ရောဂါကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းစတဲ့ ဦးခေါင်း ကနေ ခြေထောက် အထိ ကျောင်းကျိုးများစွာကို ပေးစေပါတယ် ။ ပျားရည်ရဲ့ အနာကျက်မြန် တဲ့ ကောင်းကျိုး ကို ရှေးနှစ်ပေါင်း များစွာကတည်းက အသုံးပြုခဲ့ကြပြီး အထူးသဖြင့် ပြတ်ရှနာများမှားပိုအသုံးဝင်ပါတယ် ။ သာမန်ဖျား နာမှုနဲ့ ရောဂါတွေမှာလည်း ကုသမှု အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပြီး မျိုးဆက်တစ်ခုမှနေ၍ နောက်တစ်ခုကို ကျန်း မာရေးကောင်း ကျိုးတွေကို ဆင့်ကဲပေးစေပါတယ် ။ UMF Manuka Honey လို့ခေါ်တဲ့ပျားရည်ဟာဆိုရင် ယနေ့ပျား ရည်ရဲ့ကျန်းမာေ၇းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးမှုတွေမှာ အရသာအရှိဆုံး ပျားရည်ဆေးအဖြစ် ထည့်သွင်းပြော ဆိုနေကြပြီဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီပျားရည်ဟာ ရောဂါပိုးမွှားတွေကို တိုက်ထုတ်ယုံတင်မကပဲ တစ်ရှူးများ အနာ ကျက်မြန်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးခြင်း ၊ အမာရွတ်ဖြစ်ခြင်းနှင့် ရောင်ရမ်းခြင်းများကို လျော့နည်းစေခြင်း စတဲ့အချက်တွေ ရရှိပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ ၀မ်းသွားခြင်း ၊ အစာမကြေခြင်း ၊ အစာအိမ်အနာများနဲ့ ၀မ်းပျက်ဝမ်းလျှောခြင်း ( GE) ကိုပါ ကုသဖို့အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ။
ပျားရည်ကို အစားအစာတွေမှာ အသုံးပြုခြင်းနဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကတော့ ပျားရည်ကို ရရှိတဲပင် ရင်း နဲ့ နေရာဒေသအပေါ် မူတည်ပါတယ် ။ ပျားတွေကနေရရှိတဲ့ပျားရည်ကို အသုံးပြုပြီးတော့ propolis , royal jelly , beewax ( ပျားဖယောင်း ) စတဲ့ ထုတ်ကုန်တွေ ထုတ်လုပ်ပြီး အသက်ရှုမ၀ခြင်း ၊ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း ၊ အိပ်မပျော်ခြင်း ၊ အဆင်အမြစ်နာခြင်း ၊ ၀က်ခြံနဲ့ မှိုပိုးဝင်ခြင်းစတာတွေမှာပါ အသုံးပြုတာကြောင့် ပျားရည်ကို ရိုးရာဆေး ( Traditional medicine) အဖြစ်နေရာအတော်များများမှာ အသုံးပြုနေကြပါပြီ ။ ဆက်လက်ပြီး ကျန်း မာရေး ဆိုင်ရာကောင်းကျိုးတွေကို အသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ရအောင် ။
၁ ။ Natures's Energy Booster
အရသာ ကောင်းလွန်းတယ်ဆိုတဲ့ အပြင်ပျားရည်ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေအများကြီး ရှိပါသေးတယ် ။ သဘာဝ ကစီဓါတ် ပင်ရင်း ( Natural source of carbohydrate) ဖြစ်ပြီး လူတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ကို ခွန်အားနဲ့ စွမ်း အင်တွေကို ပေးစေပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ပျားရည်ကို စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစေဖို့ အကူပစ္စည်း (Booster) အဖြစ်အပြင် ကြွက်သားများညောင်းညာခြင်း ၊ မောပမ်းနွမ်းနယ်ခြင်းတွေကိုလည်း လျော့နည်းစေပါတယ် ။ သဘာဝ သကြားအချိုအရသာဟာ လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းောကာင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ မောပန်းခြင်းတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင် ပါတယ် ။ ပျားရည်ထဲမှာပါတဲ့ ဂလူးကို့စ်ကို ခန္ဓာကိုယ်က လျှင်မြန်စွာ စုပ်ယူပြီး စွမ်းအင်ကိုတိုး တက်စေပါတယ် ။ အဲဒီအချိန်မှာ fructose ကိုတော့ ဖြေးညှင်းစွာ စုပ်ယူပြီ့း energy ကို ပုံမှန်ပဲပေးစေ ပါတယ် ။ သွေးတွင်း သကြားဓါတ်ကိုလည်း တခြားသကြားဓါတ် များနှင့်ယှဉ်လျှင်ထိမ်း ညှိပေးနိုင်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ပျားရည်ရဲ့ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးတွေကိုသိစေဖိုပအတွက်
- သင်အလုပ်သွားခါနီးတိုင်းပျားရည်တစ်ဇွန်းခန့် သောက်သုံးသွားနိုင်ပါတယ် ။
- မနက်ပိုင်းတွေမှာ မကြည်မလင်နိုးထတတ်ပြီး စွမ်းအားမပြည့်သလိုခံစားနေရရင် ပျားရည် ကို သောက် သုံး ကြည့်နိုင်ပါတယ် ။
- သင့်ကလေးငယ်တွေဟာ ပင်ပင်ပန်းပန်းဆော့ကစားပြီး ကျောင်းသွားဖို့ ငြင်းဆန်နေပါသလား ။ ပျားရည်နဲ့ sandwiches ကိုပြင်ဆင်ပေးလိုက်ပါ ။ ဒါဆို တစ်နေ့လုံး စွမ်းအားပြည့်ပြီး လန်းဆန်းတက်ကြွနေပါလိမ့်မယ် ။
၂ ။ Immunity System Builder
ပျားရည်ရဲ့ကောင်းကျိုးအများကြီးထဲကမှ အဖိုးတန်တဲ့အရာတစ်ခုကတော့ immune system booster အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းပါပဲ ။ ပျားရည်ရဲ့ ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ဂုဏ်သတ္တိနဲ့ ဘတ်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေကို သတ်နိုင် တဲ့ အစွမ်းက အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီး သင့်ကို ကျန်းမာပျော် ရွင်စေနိုင် ပါတယ် ။ ပြင်ပပိုးမွှားတွေကို တိုက်ထုတ်နိုင်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် မနက်စာမစားခင်လေးမှာ ပျားရည် တစ်ဇွန်းနဲ့ lemon တစ်ဇွန်းလောက်နဲ့ ရောပြီး ရေနွေးနွေးနဲ့ ဖျော်စပ်သောက်သုံးခြင်းအားဖြင့် ပျားရည် ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကို သိနိုင်ပါတယ် ။
၃ ။ Honey is Anti-Cancer !!
ပျားရည်ဟာ ကင်ဆာကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သလား ဆိုတာ မသေချာပေမယ့် လူအများစုကတော့ ပျားရည်ရဲ့ ကင်ဆာ ကာကွယ်ခြင်း ( Carcinogen preventing) နဲ့ ကင်ဆာကာကွယ်ခြင်းဂုဏ်သတ္တိ ( Anti-tumour properties) တွေကို စူးစမ်းလေ့လာနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ် ။
၄ ။ အိမ်တွင်းအသုံးဝင်မှုများ
- မီးလောင်နာနှင့် ပြတ်ရှနာများ
ရှေးနှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကတည်းက ပျားရည်ကို အိမ်တွင်းသုံးဆေး ၀ါးတစ်လက်အဖြစ် များစွာ သော ရော ဂါတွေနဲ့ yeast ပိုးဝင်ခြင်းတွေမှာ သုံးလာခဲ့ကြပါတယ် ။ အဆစ်အမြစ်နာခြင်း မှာလည်းအသုံး ၀င်ပြီး သူ့ရဲ့ ပိုးသတ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကြောင့် အချို့သော ဘတ်တီးရီးယားတွေရဲ့ကြီးထွားနိုင်မှု ကို တားဆီးပေးပြီး အနာသန့် ရှင်းစေခြင်းနဲ့ ပိုးမ၀င်ခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ် ။ အရေးပေါ် သဘာဝ ဆေးစွမ်းတစ်လက်အနေနဲ့လည်း ပြည်တည်နာများ ၊ အပူလောင်ခြင်း ၊ ဓါးရှခြင်း ကို လည်းသက်သာစေပါတယ် ။ပျားရည်ဟာ လေထဲက စွတ်စိုထိုင်း မှိုင်းမှုကို စုပ်ယူနိုင်စွမ်းရှိပြီး အနာကျက်ခြင်းကို အားပေးပါတယ် ။ ရောင်ရမ်း နာကျင်မှုများ ကိုလည်း လျော့နည်းစေပြီး အမာရွတ်တည်ခြင်းကို နည်းစေပါတယ် ။ Anitbacterial property များစွာပါဝင်တဲ့ UMF Manuka ကို wound dressing အတွက် အသုံးများကြပါ့တယ် ။
သင်ဟာ တခါတရံမှာ အများကြီး သောက်မိတယ်ဆိုရင် ပျား၇ည်ကို သုံးစွဲကြည့်ပါ ။ ပျားရည်ဟာ အစာအိမ်ကို သိမ်မွေ့စေပြီး fructose ပါဝင်တဲ့အတွက် အသည်းကနေ အရက်ကို oxidation ဖြစ်စေတဲ့အရှိန်ကို မြင့်တက်စေပါတယ် ။ ဒါကို sobering agent လို့လည်းခေါ်ပါတယ် ။ လိမ္မော်ရည် 80ml မှာ ပျားရည် 15ml နှင့် ဒိန်ချဉ် 70ml ရောစပ် မွှေနှောက်ကာ အရက်နာကျခြင်းကို ဖြေပေးနိုင်ပါတယ် ။
အာသီးရောင်ချောင်းဆိုးခြင်းကိုလည်း ပျားရည်က နိုင်စေပါတယ် ။ Professional singer တွေဟာ sore throats ကိုကာ ကွယ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် သီချင်းမဆိုခင်မှာ ပျား၇ည်ကို သောက်သုံးလေ့ရှိကြပါတယ် ။ တ ရုတ်တွေ ကတော့ အပူများရင်အာသီးရောင်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြပြီး ပျားရည်ကို သောက်သုံးကြပါတယ် ။ ပျားရည်နှစ် ဇွန်းခန့်နဲ့ lemon လေးဇွန်း ကိုရောစပ် ဆားအနည်းငယ်ထည့်ပြီး အာသီးရောင်နေ စဉ်အ တွင်း သောက် သုံးကြည့်ပါ ။
သင်အိပ်မပျော်ဘူးလား ။ နို့နဲ့ပျားရည်ကို သောက်သုံးကြည့်ပါ ။ နို့ပူပူလေး တစ်ခွက်ကို ပျားရည်တစ် ဇွန်းခန့်ရော စပ်ပြီး အအေးခံသောက်သုံးပါက နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်စေပါတယ် ။
Ref : Internet ( Benefits of honey )
Labels: Appetite, Education, Environmental health, Family health, Health Information Management, honey, Public health